मन नपर्ने लोला - होली विशेष - साप्ताहिक
मन नपर्ने लोला
सुप्रिया कटवाल, मोडल/अभिनेत्री
हामीले मनाउने चाडपर्वहरूमा मलाई होली पनि उत्तिकै प्रिय लाग्छ । यद्यपि म साथीभाइ र परिवारबीच मनाइने होलीमा मात्र रमाउँछु । हुल बाँधेर, अरुलाई दु:ख तथा चोट पुर्‍याउने हिसाबले मनाइने होली मलाई मात्र होइन, कसैलाई पनि मन पर्दैन । मलाई होलीमा लोलाको प्रयोग पटक्कै मन पर्दैन ।
गालामा हल्का अबिर लगाएर पनि होली मनाउन सकिन्छ भने कसैलाई ताकेर किन लोला हान्नु ? होलीमा प्रयोग गरिने लोला युवतीहरूप्रति बढी लक्षित हुन्छ । त्यसक्रममा लुकेर, पछाडिबाट, टाढाबाट, नजिकबाट जसरी पनि युवतीहरूमाथि लोलाको प्रहार हुनसक्छ ।
पानीले भरिएको लोलाको प्रहारबाट युवतीहरूको शरीरको कुनै पनि ठाउँमा चोट लाग्न सक्छ । अझ लोलाको प्रहार युवतीहरूको संवेदनशील अंगमा पर्‍यो भने त उनीहरू भुतुक्कै हुन्छन् । त्यसैले पनि मलाई होलीमा लोलाको प्रयोग पटक्कै मन पर्दैैन । केही वर्षअघिको होलीमा म आफैं लोला प्रहारको शिकार भएकी थिएँ । होली आउनुभन्दा केही दिनअघि कै कुरा हो ।
एउटा म्युजिक भिडियोको छायांकनका लागि घरबाट बाहिर निस्कँदै थिएँ, मूल सडकमा पुग्ने बित्तिकै ममाथि लोला प्रहार भयो । रातो अबिर मिसाइएको लोलाको प्रहारबाट म निथ्रुक्क भिजें । मलाई छायांकनस्थलमा पुग्न ढिला भैसकेको थियो, एकाबिहानै लोला खाएपछि पुन: घर फर्किएर लुगा फेरेर जानुपर्दा एकातिर म समयमा छायांकनस्थलमा पुग्न सकिन भने अर्कोतिर उक्त लोलाले मलाई जुन प्रकारको पीडा दिएको थियो, त्यो म कसैलाई बताउन सकिरहेकी थिइन् भने लुकाउन पनि सकिरहेकी थिइन ।
प्रकाशित :फाल्गुन १७, २०७४
मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नु नपर्ने
चार्ज गर्नु नपर्ने स्मार्टवाच
तपाईंलाई नेपाली नेताहरूको मन नपर्ने बानी के हो ?
तिहारको मन पर्ने तथा मन नपर्ने पक्ष
कामनाका दसैंको मन पर्ने तथा मन नपर्ने पक्ष
प्रमोदका दसैंको मन पर्ने तथा मन नपर्ने पक्ष
होली विशेषबाट अरु
होलीमा मदिराको रंग चैत्र ६, २०७५
अर्ग्यानिक रंग प्रयोग गरौं चैत्र ६, २०७५
होलीको खाना चैत्र ६, २०७५
होली खेल्दा ध्यान दिउ चैत्र ६, २०७५
सरकार कठोर चैत्र ६, २०७५
२६ वर्षअघिको त्यो होली चैत्र ६, २०७५
विदेशी पर्यटकसँग रंग खेल्ने अवसर चैत्र ५, २०७५
आधुनिक रंगको असर चैत्र ५, २०७५
होलीको झझल्को चैत्र ५, २०७५
भाङ खाएपछि उफ्री–उफ्री नाचेछु चैत्र ५, २०७५